Smart Meters & Endinal Zvigadzirwa
Solar PV Module Series Zvigadzirwa
Tine nyanzvi yakasimba yeR & D tekinoroji timu, simbisa yakakwirira tekinoroji kuvandudza kwezvakagadzirwa uye kutungamira zvizere kutarisirwa kwevatengi. Uye isu zvakare tine yakanakisa mushure-yekutengesa basa timu yakatsaurirwa vatengi vedu.
Isu takakurumbira pasi rose nemagadzirwa edu emhando yepamusoro. Ine akateedzana akasimba kunaka ekutonga mashandiro kubva kubhodhi bvunzo kuenda kumafekitori ekugadzira, isu tinosimbisa zvizere zvigadzirwa zvedu zvinosangana neizvo zvinodiwa maindasitiri epasi rose.
Nevashandi vanopfuura zviuru mazana matatu uye vanopfuura zviuru makumi manomwe emamirimita emamita kuungana pamwe neyekugadzirisa musangano uchifambiswa nezvigadzirwa zvepamberi zvepasi, kugona kwedu kugadzirwa kunogona kuzadzisa zvido zvemisika yekutengesa nekumhiri kwemakungwa.
Zvitupa & Kukudzwa
Imwe Pasi Inotungamira Energy Meter , Single Pasika Prepaid Meter , Single Pasika Meter , Imwe , Single Pasika Electric Meter , Single Pasika Smart Energy Meter ,